Lohataona - Wikipedia
Ny lohataona no fizaran-taona voalohany amin'ny taona. Amin'ny faritra misy fizaran-taona efatra dia mandimby ny ririnina izy sady dimbiasan'ny fahavaratra. Amin'ny lohataona no manomboka mitsiry sy maniry avokoa ireo zava-maniry nihintsan-dravina nandritra ny ririnina. Mitombo ny halavan'ny andro ary mihena ny an'ny alina. Betsaka ny hazavana sady mihamafana ny andro nefa tsy mbola misy na betsaka ny orana.
Raha zaraina efatra mitovitovy ny taona iray dia izao: ao amin'ny ila-bolantany avaratra dia mahafaoka ny volana Marsa sy Avrily ary Mey ny lohataona fa ao amin'ny ila-bolantany atsimo kosa dia manambatra ny volana Septambra sy Oktobra ary Novambra izany.
Zava-miseho eo amin'ny natiora amin'ny lohataonaHanova
Mihavao ny voary. Mitsonika ny orampanala. Miakatra ny ranon-kazo. Mitsimoka na manomboka mamony ny ankamaroan'ny zavamaniry. Rakotra voninkazo ny toerana misy bozaka aman'ahitra.
Asa sy fankalazana fety amin'ny lohataonaHanova
Ao amin'ny tetiandro iraniana dia andro voalohany amin'ny taona ny andro voalohany amin'ny lohataona atao hoe Nuruz izay ankalazaina amin'ny 19 na 20 na 21 Marsa.
Ho an'ny Rosiana dia ny 1 Marsa no andro voalohany amin'ny taona fa ho an'ny Aostraliana kosa dia ny 1 Septambra izany. Any Frantsa dia ny 20 na 21 no fanombohan'ny lohataona.
Manomboka amin'ny 1 Avrily ny lohataona any amin'ireo Sinoa izay fotoam-pamafazana.
Ny tetiandro seltika dia manomboka ny lohataona amin'ny 1 Febroary izay ankalazana ny fety atao hoe Imbolc (vakina hoe: imbolg).
Ny Sindy (mponina any India) dia mankalaza ny taom-baovao amin'ny fiandohan'ny lohataona. Amin'ny 20 na 21 Marsa ny any India sy Nepaly no mankalaza ny fetin'ny loko.
Ny Japoney koa dia mankalaza ny atao hoe Setsubun izay fetim-pirenena ho an'ny fiavian'ny lohataona araka ny tetiandro manara-bolana.
Amin'ny lohataona no ankalazan'ny Tamoly ny Puthandu, sy ankalazan'ny Tailandey ny Songkran, ary ankalazan'ny Birmana ny Thingyan.
Ny taom-baovao malagasy dia ankalazaina amin'ny fiantombohan'ny lohataona amin'ny volana Septambra, ho an'ny Malagasy sasany, amin'ny maha fizaran-taona voalohany azy.
Ny fankalazana ny fiandohan'ny lohataona, izay fiandohan'ny taona koa, dia misy milaza fa natao tamin'ny faritra maro teto Madagasikara, ka Volambita, araka ny anaram-bolana malagasy avy amin'ny teny sanskrita, no fiantsoana izany volana izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lohataona&oldid=1041400"
Dernière modification le 10 Desambra 2021, à 15:54
Voaova farany tamin'ny 10 Desambra 2021 amin'ny 15:54 ity pejy ity.